Amaxabiso ethu ukutshintsha ngokuxhomekeke unikezelo kunye neminye imiba emarikeni. Siya kuthumela kuwe uluhlu lwamaxabiso oluhlaziyiweyo emva inkampani yakho, qhagamshelana nathi xa ufuna ulwazi olungaphezulu.
ukuze Small samkelwe, i-MOQ i-PC-4 kuphela.
Kuba production mass, ixesha phambili ziintsuku 20-30 emva kokufumana intlawulo. Amaxesha akhokelayo kusebenza xa (1) siye safumana intlawulo yakho, kwaye (2) sinayo imvume yakho yokugqibela imveliso yakho. Ukuba maxesha ethu ukhokelo azisebenzi nge umhla yakho, nceda uye phezu iimfuno zakho ukuthengisa yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukubonelela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi akwazi ukwenza loo nto.
Uyakwazi ukwenza intlawulo kwi-akhawunti yebhanki yethu.
Thina iwaranti izinto zethu nokusetyenzwa. Ukuzinikela kwethu ukuba ukwaneliseka kwakho iimveliso zethu. Xa iwaranti okanye akunjalo, oko inkcubeko yenkampani yethu zokwazisa kunye nezo zokusombulula yonke imiba nabaxhamli ulwaneliseko wonke. Umgaqo-nkqubo jikelele konke for umgangatho imveliso iinyanga ezili-18 zokwaleka.
Ewe, sisoloko ukusebenzisa kwizinga eliphezulu kumazwe ukuphakheja. zokubopha zeengcali kunye neemfuno ivale non-esezantsi kungaba kukho intlawulo eyongezelelweyo.
Iindleko yokuthumela kuxhomekeka kwindlela okhetha ukufumana impahla. Express ngokuqhelekileyo, ngeyona kodwa ndlela kuyabiza. Ngu ethutha ulwandle sesona sisombululo kakhulu imali enkulu. Ngqo amazinga zezomoya singakwazi kukunika kuphela xa siyazi iinkcukacha oya, isixa, ubunzima kunye nendlela. Nceda uqhagamshelane nathi ukufumana ingcaciso engaphezulu.